Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ndị mmadụ na Kabul furu efu na Iran
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • Safety • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
Ọtụtụ mba nọ na Afghanistan na -anwa ifefe ụmụ amaala ha na nchekwa mgbe ndị agha Taliban weghaara mba ahụ.
Ọdụ ụgbọ elu Kabul dị n'okpuru nchịkwa America na Ukraine zigakwara ụgbọelu ka ọ gbapụ ụmụ amaala ya. Ezuru ụgbọ elu a wee pụọ maka Iran.
Otu ndị mmadụ amabeghị ụgbọ elu Ukraine nke rutere Afghanistan na Sọnde ka ọ gbapụ ndị Ukraine.
Onye ozi mba ofesi Ukraine gwara ndị mgbasa ozi Ukraine, sị: “Na Sọnde gara aga, ndị ọzọ weghara ụgbọ elu anyị.
Ezuru ụgbọ elu ahụ kama ịnya ụgbọ elu ndị Ukraine, mbọ mgbapụ atọ anyị na -esote enwebeghịkwa ihe ịga nke ọma n'ihi na ndị Ukraine enweghị ike ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu.
Dị ka Minista mba ofesi Ukraine, ndị ntọ ahụ ji ngwa ọgụ.
Ndị ọzọ ụgbọ elu mgbapụ wepụrụ n'enweghị nsogbu.
Agbanyeghị, onye osote minista ekwughị ihe ọ bụla gbasara ihe mere ụgbọelu ahụ ma ọ bụ ma Ukraine ga -achọ iweghachi ya.
Enweghị ozi ọ bụla gbasara ka enwere ike isi gbapụ ụmụ amaala Ukraine na Kabul n'ụgbọ elu a 'ihe zuru ezu' ma ọ bụ ụgbọ elu ọzọ Kyviv nwere ike izipu.
Onye ozi ahụ kwusiri ike na ọrụ diplọma nke Ukraine nke minista mba ofesi Dmitry Kuleba na -edu "na -arụ ọrụ na ọnọdụ nnwale mberede" n'izu ahụ dum.
Na Sọnde, ụgbọ elu ụgbọ agha nke mmadụ 83 nọ n'ụgbọ ahụ, gụnyere ndị Ukraine 31, si Afghanistan bịarute na Kyiv.
Officelọ ọrụ onye isi ala kọrọ na ndị ọrụ agha Ukraine 12 laghachiri n'ụlọ, ebe ndị nta akụkọ si mba ọzọ na ndị ọnụ na -eru n'okwu ndị rịọrọ enyemaka ka a kpọpụkwara.
Ọfịs ahụ gbakwụnyere na ihe dị ka ndị Ukraine 100 ka na -atụ anya ịkwaga na Afghanistan.